मन्त्रीलाई फोन गर्दा महिलाले तथानाम मुख छाडेपछि... | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मन्त्रीलाई फोन गर्दा महिलाले तथानाम मुख छाडेपछि...
मन्त्रीलाई फोन गर्दा महिलाले तथानाम मुख छाडेपछि…
माघ १७ गते, २०७४ - ०९:०७
काठमाडौं । ‘को मन्त्री ? कस्तो मन्त्री ? राँडाका छोराहरु, काम पाउँदैनन्, मलाई फोन गरेर दुःख दिन्छन् ।’ यदि तपाइासाग आपूर्ती मन्त्री जयन्त चन्दको भिजिटिङ कार्डमा भएको ९८४३६३६७… नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने मीना नामक महिललाले उठाउछिन् । मन्त्रीज्यूको नम्बर हैन ?’ भनेस सोध्नुस् त, माथि लेखिएकै भाषमा माचकांरी गाली खानुहुन्छ ।
जनअास्था सापताहिकमा खबर छ–अहिलेको सरकार नै लम्फुदासहरुको झुण्ड बनेको बेला ती मन्त्रीका भिजिटङ कार्ड छाप्ने कर्मचारी पनि कम्ताका रहेनछन् । नम्बर मन्त्रीको होईन्, तर कार्डमा छापिएको ९८४३६३६७… । फेरि मन्त्री आफैले फोन गर्नुस् है’ भन्दै दुईमध्ये मुनितरको नम्बर देखाएर दिएको भिजिटिङ कार्ड । हिजो मंगलबार तयसैमा फोन गर्यो । तर फोन उठाउने महिलाले माथिका शब्दहरु बर्साएर गालि गरिन् । मन्त्रीलाई यसबारे सोधेपछि बलल थाहा भयो कि आफ्नै सचिवालयका कर्मचारीले गलत नम्बर छापिदिएका रहेछन् । । चन्दले मन्त्री भएपछि चलाउन थालेको मोबाइल नम्बर हो ९८४३०३६७९५ । तर कार्डमा ० को ठाउँमा ६ हालिएपछि मीनाले दुःख पाईन् ।
यसरी अर्काको नम्बर राखेर अरुलाई दुःख दिन पाइदैन् । तर कसैले जानाजान नै त्यसो भने पनि त्यसउपर कारवाहि हुने छैन् । ‘यस्तो फोन आउँछ भनेर तपाइँले कतै रिपोर्ट गर्नुभएन् त ? भने ती महिलालाई सोध्दा उनले रिसाएर जवाफ दिई त्यसका बाजेलाई, कहाँ गएर मैले के रिपोर्ट गर्ने होला ।’
माघ १७ गते, २०७४ - ०९:०७ मा प्रकाशित